Saturday August 17, 2019 - 20:38:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dabaal degyo ballaaran ayaa ka bilaawday wadanka Suudaan saacado kadib markii si rasmi ah loo saxiixay heshiiska lagu dhisayo xukuumad Rayid ah 30 sano kadib markii ugu horraysay uu yeeshay dalkan dhaca bariga qaaradda Afrika.
Munaabad ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Al Khurduum ayna goob joog ka ahaayeen wufuud caalami ah ayey kooxaha mucaaradka ah iyo saraakiisha Melleteriga ku kala saxiixdeen heshiis kama dambays ah.
Muusa Faki oo ah guddoomiyaha Ururka Midowga oo ku sugnaa madashii heshiiska lagu saxiixayay ayaa tallaaban ku tilmaamay mid taariikhi ah wuxuuna dhinacyada ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan wixii ay ku heshiiyeen.
R/wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Jaad oo khudbado ka jeediyay madashii heshiiska ayaa bogaadiyay dhismaha dowladda madaniga ah, malaayiin qof shacab ah ayaa isugusoo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Al Khuduum iyo sidoo kale magaalada Umu Durmaan.
Golaha Melleteriga iyo kooxaha kacdoonka ayaa ku heshiiyay in R/wasaaraha xukuumadda cusub uu noqdo nin lagu magacaabo Cabdalla Xamduuk oo horay usoo noqday safiirka Suudaan ee xarunta Q.Midoobay.
Culimaa'udiinka Suudaan ayaa isbedelkan u arka mid aan waxba soo kordhin doonin mar haddii ay dhinacyada heshiiyay iska diideen hirgelinta ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Jeneraaladii hoggaaminayay Inqilaabkii Melleteri ee wadanka Suudaan ka dhacay ayaa lagu eedaynayaa in ay mas'uul ka yihiin xasuuqii lagula kacay shacabka kacdoonka dhigayay xasuuqaas oo dhacay bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay.